नेपालमा इन्टरनेट कसको सस्तो ? | Yangwarak Focus
Home प्रविधि नेपालमा इन्टरनेट कसको सस्तो ?
नेपालमा इन्टरनेट कसको सस्तो ?
८ भाद्र २०७७, सोमबार ०४:२६
साेमबार, भदाै, ८
याङवरक । पछिल्लो समय फिक्स ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवामा फाइबरबाट इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग एकदमै तीब्र रुपमा विस्तार हुँदै गइरहेको छ । सेवाप्रदायकहरु वायरलेस, एडीएसएल, केबल लगायतका अन्य प्रविधि प्रतिस्थापन गर्दै फाइबर इन्टरनेटमै जोड दिइरहेका छन् ।
उच्च गतिको विश्वसनीय सेवा हुने भएकाले पनि यो इन्टरनेट सबैजसोको रोजाईको विषय बन्दै गएको हो । दर्जनौंको संख्यामा रहेका सेवाप्रदायकहरु पनि पहुँच विस्तारसँगै सस्तो मूल्यमा उच्च गतिको इन्टरनेट दिने होडमा छन् ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले फाइबर इन्टरनेटमा वर्ल्डलिंक सबैभन्दा अगाडि छ । असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार हालसम्म तीन लाख ३० हजार चार सय ४९ फाइबर इन्टरनेटका ग्राहक रहेको उक्त कम्पनीका कूल ग्राहको संख्या ३ लाख ३४ हजार २३४ रहेकाे छ ।
२ लाख ३५ हजार ७८२ ग्राहक साथ समग्र फिक्स लाइन इन्टरनेटमा दोश्रो धेर ग्राहक रहेको नेपाल टेलिकमका फाइबरमाा भने १० हजार तीन सय ३५ ग्राहक मात्रै छन् । त्यस्तै केबल इन्टरनेट सहित ९१ हजार ११८ ग्राहक सहित तेश्रो ठूलो इन्टरनेटसेवा प्रदायकको रुपमा रहेको सुबिसुले फाइबर ग्राहकको संख्या ५६ हजार तीन सय ५४ पुर्‍याइसकेको छ ।
यस्तै ७७ हजार ८०६ रहेको भायनेटका सबै प्रयोगकर्ता अप्टिकल फाइबरमै रहेका छन् । त्यसपछि फाइबर इन्टरनेटमै क्रमशः क्लासिक टेकक ७५ हजार चार सय ४०, टेकमाइण्ड्स २९ हजार ६ सय २२ ग्राहक रहेका छन् । ब्रोडलिंक २८ हजार दुई सय १५ र वेबसर्फरका १४ हजार आठ सय १९ ग्राहक रहेका छन् । हामीले १० हजारभन्दा बढी ग्राहक रहेका फाइबर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको इन्टरनेट मूल्यका हिसावले कसको सस्तो छ भनेर विश्लेषण गरेका छौँ ।
कसको सेवा लिने ?
टप आठ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले घरेलु ग्राहकका लागि स्पीडका आधारमा आठ एमबीपीएसदेखि ८० एमबीपीएस गतिसम्मका विभिन्न इन्टरनेट प्याकेज अफर गरिरहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा थोरै स्पीडका साथ नेपाल टेलिकमले सस्तोमा सेवा दिइरहेको छ । आठ एमबीपीएस गतिको फाइबर इन्टरनेटका लागि उसले मासिक आठ सय रुपैयाँमै उपलब्ध गराइरहेको छ ।
यदि तपाई उच्च गतिको सस्तो इन्टरनेट खोजिरहनुभएको छ भने वेबसर्फरको २२ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट मासिक एक हजार रुपैयाँमै पाउन सक्नुहुनेछ । यस्तै ब्रोडलिंकले पनि एक ११५० रुपैयाँमै २५ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज दिइरहेको छ । सस्तो मूल्यमा अझ धेरै स्पिडको इन्टरनेटको खोजिमा हुनुहुन्छ भने क्लासिक टेकको १४ सय रुपैयाँमा ४० एमबीपीएस तथा सुबिसुको ११५८ रुपैयाँको ३० एमबीपीएस इन्टरनेट तपाईंको रोजगाइको विषय बन्न सक्छ ।
यदि तपाई अझ धेरै स्पीडको इन्टरनेट खोजिरहनुभएको छ भने वेबसर्फरको मासिक १८९० रुपैयाँमा ८० एमबीपीएसको इन्टरनेटको विाषयमा पनि सोच्न सक्नुहुन्छ । नेपालमा हालसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकले घरेलु ग्राहकका लागि उपलब्ध गराइरहेको इन्टरनेट गतिमा यो नै सबैभन्दा बढी हो ।
यद्यपी, त्रैमासिकदेखि वार्षिक प्याकेजको रुपमा इन्टरनेट जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले थप सस्तोमा इन्टरनेट पाउन सक्नुहुनेछ । कुन सेवा प्रदायकको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने निर्णयमा मूल्य एकमात्रै आधार होइन । त्यसमा सेवाको गुणस्तर र ग्राहक सेवाको विषय झन् महत्वपुर्ण रहन्छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विशुद्ध रुपमा इन्टरनेट प्याकेजमा मात्रै प्रतिस्प्रर्धा गर्नेभन्दा विभिन्न उपहार प्याकेजका आधारमा ग्राहकहरुलाई आफूतर्फ खिचिरहेका छन् । त्यस हिसावले डिजिटल टेलिभिजन सेवा, छूट तथा अफर, सेवाको गुणस्तर, समस्या आउँदाको मर्मतसम्भार आदि लगायतका सबै विषयको विचार गरी कसको इन्टरनेट जडान गर्ने भन्ने विषयको निर्णय लिनु मुद्धिमानी हुनेछ ।
यस्ता छन् सेवाप्रदायकका इन्टरनेट प्याकेज
८ एमबीपीएसको ८०० रुपैयाँ
१८ एमबीपीएसको १,६०० रुपैयाँ
३५ एमबीपीएसको २,००० रुपैयाँ
५५ एमबीपीएसको २,२०० रुपैयाँ
३० एमबीपीएसको १,५५० रुपैयाँ
४० एमबीपीएसको १,८५० रुपैयाँ
६० एमबीपीएसको २,२०० रुपैयाँ
४० एमबीपीएसको १,८०० रुपैयाँ
३० एमबीपीएसको १,२०० रुपैयाँ
४० एमबीपीएसको १,३७५ रुपैयाँ
६० एमबीपीएसको १,७५० रुपैयाँ
३० एमबीपीएसको १,१५८ रुपैयाँ
४० एमबीपीएसको १,३५८ रुपैयाँ
७५ एमबीपीएसको २,०५८ रुपैयाँ
१० एमबीपीएसको १३,५०० रुपैयाँ
१५ एमबीपीएसको १५,८०० रुपैयाँ
३० एमबीपीएसको २०,६०० रुपैयाँ
२५ एमबीपीएसको १,१५० रुपैयाँ
४५ एमबीपीएसको १,६०० रुपैयाँ
२२ एमबीपीएसको १,००० रुपैयाँ
८० एमबीपीएसको १,८९० रुपैयाँ
Previous articleपीएसजीकै पूर्वखेलाडी किङ्ग्सले कोमानले गरेको गोलमा बायर्न म्युनिखले च्याम्पियन लिग जितेको छ।
Next articleमलेशिया बाट पाँच ओटा चार्टर्ड उडान हुँदै जानकारिकाे लागि पूरा समाचार पढ्नुहाेला
सुमन सहयात्री - ८ भाद्र २०७७, सोमबार ०४:२६